Ogaden News Agency (ONA) – Midowga Yurub oo Eedayn Culus Usoo Jeediyay Soomaaliya.
Midowga Yurub oo Eedayn Culus Usoo Jeediyay Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeynayaa in ay ku xad gudubtay Xuquuqda Aadanaha, islamarkaana mudaddii ay jirtay geysatay Xadgudubyo badan oo ka dhan ah Xuuquuqda Aadanaha.
Kulan ay yeesheen Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa lagu meel mariyay Qaraar ka hadlaya in dowladda Soomaaliya ay hareer martay Hanaanka Ilaalinta Xuquuqda Aadanaha, islaamrakana ay jiraan Xadgudubyo loo geystay dad Shacab ah.
Baarlamaanka Midowga Yurub waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ka gaartay heerkii ugu hooseeyay Xoriyatul Qowlka, Waxaana Baarlamaanku sheegay in ay jirto Caburin laguhayo Wariyeyaasha Soomaaliyeed.
Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay ilaaliso Xuquuqda Aadanaha, islamarkaana hadii ay dhici weyso ay ka fiirsan doonaan taageerada la siiyo Soomaaliya, iyagoo si deg deg ah ugu baaqay in la saxo qaladaadka jira.
Sidoo kale Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa ku eedeeyay maamul goboleedyadda in ay geysteen Bilihii lasoo dhaafay Xadgudubyo ka dhan ah Xuquuqda Aadanaha oo ay ugu horreyso caburinta Wariyeyaasha.